Rufa rwaAndy Brown rwandibata: Sista Flame	Thursday, 29 March 2012 08:38	naAbel Ndooka SHASHA yemusambo wereggae — Sista Flame — anoti ari kushushikana zvikuru nekufa kwakaita shamwari yake, Andy Brown, uyo waakashanda naye kwemakore.
Mare orwisa gomarara	Thursday, 22 March 2012 09:28	neMunyori weKwayedza MUIMBI wemusambo weR‘n’B, Cynthia Mare, oti ave kushanda neCancer Association of Zimbabwe mukuparadzira chenjedzo pamwe nekurwisa chirwere chegomarara.
Macheso omhanya neMuddy Face	Thursday, 22 March 2012 09:27	naShein KanyumwaALICK Macheso anoti pari zvino ava kuda kumbosimudzira chikwata cheMuddy Face icho chaitungamirirwa nemuchakabvu, Cephas Mashakada, sezvo Tryson Chimbetu ava kukwanisa kuzvimirira ega pamashoo ake.
Matshasi akabura dambarefu idzva	Thursday, 22 March 2012 09:26	naAbel Ndooka SHASHA yenziyo dzerudo nedzechitendero — Daniel Calvin Matshasi uyo ari kushandira kuSouth Africa — akadzoka kumusha kuzoparura dambarefu rake idzva rechishanu iro raakabura.
Kutorerana vaimbi kwakaipa: Muronzi	Friday, 16 March 2012 10:09	neMunyori weKwayedzaTAKESURE Muronzi okurudzira vaimbi kuti vashande pamwe chete uye anoshoropodza zvikuru nyaya yekutorerana vashandi achiti zvinoita kuti basa
Vaimbi vorangarira gavhuna Karimanzira	Friday, 16 March 2012 10:06	naShein Kanyumwa VAIMBI vanodarika 25 vachaita shoo yekurangarira vaive gavhuna weHarare Province, muchakabvu Cde David Karimanzira, avo vakashaya gore rapera.
Mbiri yaJames Chimombe yosimudzirwa	Thursday, 08 March 2012 10:05	naAbel NdookaLINCOLN Chimombe uyo anove mwana wemunin’ina wemushakabvu, James Chimombe, akatsiidza kuti mhanzi yababamukuru vake haimbofa yakaparara nekuti iye ari kuisimudzira.
Handioni chakaipa kuridza zvechitendero pamafaro: Maponga	Thursday, 08 March 2012 10:02	neMunyori weKwayedzaMUIMBI wemhanzi yechitendero yakarerekera kusungura — Taurai Maponga — anoti hapana chakaipa kuona vaimbi vakaita saiye vachiridzira munzvimbo dzisiri machechi.
Ma‘gala’ obatsira vachiri kusimuka	Thursday, 08 March 2012 10:00	neMunyori weKwayedzaVAIMBI vachiri kusimuka vakatenda Hurumende nekuita kwairi kuita magala akasiyana-siyana munyika, vachiti izvi zvinovavhurirawo mikana yekuonekwa nevanhu vakawanda pamwe nekusimudzira mabasa avo.
Tonanga kuChipinge	Thursday, 01 March 2012 07:16	neMunyori weKwayedzaHAKUDANWI anonzwa neMugovera svondo rino kuChipinge paChipinge Primary School
Taso adzoka mudariro	Thursday, 01 March 2012 07:14	naAbel Ndooka SHASHA yemusambo wepantsula, Shepherd Unodziyo uyo anonyanya kuzikanwa saTaso, odzoka zvakare mudariro nedambarefu rake rechi10 rinonzi Wakanga Wanzwei iro riri pamusoro pekusimudzira nyika yeZimbabwe.
‘Ticharamba tichisimudzira mhanzi yaMafika	Thursday, 01 March 2012 07:13	neMunyori weKwayedzaMHURI yekwaMafika kupfurikidza nevakomana vechidiki vanozivikanwa nekuti Mobfiggaz munyaya dzekuimba vakatsiidza kuramba vachisimudzira mhanzi yemushakabvu, Taku Mafika.
« Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End »	Page 8 of 81	Search	Sponsored Links